EACC oo qiimeyn la xiriirta halista musuqmaasuqa ka sameysay 22 ismaamul | Star FM
Home Wararka Kenya EACC oo qiimeyn la xiriirta halista musuqmaasuqa ka sameysay 22 ismaamul
EACC oo qiimeyn la xiriirta halista musuqmaasuqa ka sameysay 22 ismaamul
Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay in ilaa iyo hadda 22 ka mid ah ismaamullada dalka laga sameeyay qiimeyn ku aaddan khatarta falalka wax isdaba marinta.
Waxaa si gaar ah barnaamijyadan loogu eegayaa golayaasha dowlad deegaannada wadanka.
Hannaankan ayaa looga gol-leeyahay in sare loogu qaado dadaallada looga hor tagayo falalka musuqmaasuqa .
Sidoo kale waxaa uu gacan ka gaysanayaa in xilli hore la ogaado oo wax laga qabto qorsho kasta oo lagu lunsanayo kheyraadka dadweynaha.
Previous articleUK oo ganaaxaysa dadka aan u hoggaansamin xeerarka karantiilka
Next articleShacabka Garissa oo loogu baaqay in ay bixiyaan qarashaadka biyaha